RASMI: Leo Messi Oo Ku Guuleystay Xidigii Ugu Fiicnaa Kulamadii Isbuucaan Laga Dheelay CL %
Xidiga kooxda kubada cagta Barcelona, ee Lionel Messi, ayaa waxaa lagu abaal-mariyay inuu noqday midkii ugu fiicnaa kulamadii isbuucaan laga dheelay lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka xiisaha leh ee Champions League.
Messi, ayaa wuxuu dhaliyay labo gool kulankii ay Barcelona, soo kusoo dar-dartay garoonkeeda Camp Nou, markaasoo uu kulankooda kusoo dhamaaday 3-0 – Osman Dembele, oo Blaugrana udheela ayaa goolka labaad saxiixay.
Labadaas gool ee uu dhaliyay laacibka lamberka 10-aad uqaata Barca, ayaa waxay ubuuxisay tiradda 100-leyda goolasha ee uu ka dhaliyay tartanka Champions League, islamarkaana uu ku biiray liiska xidigaha diiwaanka loogu qoray Dhaga-weyne.
Lionel Messi, ayaa wuxuu ku garaacay qiimeynta ciyaaryahano ilaa iyo saddex gaaraya, kuwaasoo kala ah: Džeko [AS Roma ayuu udheelaa], Ben Yedder [Sevilla ayuu ka tirsan yahay] iyo Müller [Bayern Munich ayuu kabtan uyahay].
Siakstaba, sida la aaminsan yahay Leo Messi ayaa wuxuu ku muteystay inuu ku guuleysto Abaal-gudkaan kadib markii uu kooxdiisa ku hogaamiyey guul weyn, islamarkaana uu kala diray daafacyadda Los Blancos, markaasoo uu goolal uu dhaliyay uuna caawiyay mid kale.